လေနုအေး: ဟိုဟိုဒီဒီ နိုဝင်ဘာ
Posted by တန်ခူး at 5:51 PM
အစ်မရေ အဲဒီ ၃လောင်းပြိုင်လူသတ်မှုက ညီမတို့ block မှာဖြစ်တာ။ ည၁0နာရီလောက် ကွဲကျသံ နဲ့ လူတွေဆူသံကြာလို့ဆင်းကြည့်တော့ လူတစ်ယောက် ၁၂ထပ်ကခုန်ချသေနေတာ။ သူနေတာ က ၆ထပ်မှာ။ ချက်ချင်းမသေဘူး ဆေးရုံရောက်မှသေတာ။ ဒီနေ့မှ အသုဘချတာ။ နောက်မှသိရတာက သူ့ကလေးနှစ်ယောက်ကို လည်ပင်းညှစ်သတ်ပြီး အိမ်ကိုပါမီးရှို့တာတဲ့။ သူက စင်ကာပူက ဆူရှီဆိုင်တွေ ရဲ့မန်နေဂျာတဲ့။ လခလဲကောင်းမဲ့ပုံပဲ။ လောင်းကစားကြောင့်လို့ သတင်းမှာပါတယ်။ အကြွေးတွေတင် ငွေတွေချီး နဲ့ နောက်ဆုံးမခံနိုင်လို့ အဲလိုဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ မသေခင်ကလဲ အရက်တွေသောက်လို့ ကြောင်များကြောင်သွားလား မသိပါဘူး။ ကလေးတွေက သနားစရာ ၃နှစ်နဲ့ ၆နှစ် တဲ့။ ဒီနေ့ အသုဘချတော့ အခေါင်းသုံးခုနဲ့ သနားစရာပါ။ ညီမက တော့ ညညကြောက်ကြောက်နေမိတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ သွားကြည့်မိတာကိုး။
ဘုရားစာပဲရွတ်ရမလို။ ကြောက်နေမိလို့ ခုတလော ညည စောစောအိပ်ဖြစ်တယ် :)
အော်..ဟတန်ခူးရဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီနိုဝင်ဘာဖတ်ပြီးး ကြောက်လ့လန့်သံဝေဂ ရ၊ ခက်တာပဲနော်..လူတွေလည်း အသိဉာဏ်ဆင်ခြင်တုံတရားတွေ ပျောက်ဆုံးကုန်ပြီထင်ရဲ့။ ဒါလည်း တိုးတက်လာနေတဲ့ မြို့ပြရဲ့ ဆိုးကျိုးတခုထင်ပါတယ်လေ..
Nov 13 က World Kindness ဆိုလို့ ဝမ်းသာမိပါတယ်...
"u discussed about superstitious
so, how abut tomorrow
most westerners assumed
that 13 and friday is unlucky day
ဘာပဲပြောပြော World Kindness day ဆိုတာလေးအတွက် ကောင်းတဲ့နိမိတ်လေးပဲလို့ ခံယူလိုက်ပါတယ်....
မတန်ခူးရဲ့ နိုဝင်ဘာလေးကို သဘောကျမိတယ်...
အရမ်းကောင်းတဲ့ post လေးပါ အစ်မ။
အမရဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ နိုဝင်ဘာက သည်းထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းတွဲတွေလိုပဲ.. လူသတ်တဲ့အမှုတွေတော့ ဒီမှာလည်း ခဏခဏ ကြားရတယ် အမရယ်..သေသွားတဲ့ ကလေးလေးတွေ သနားပါတယ်.. သူ့အမေတော့ ရင်ကျိုးမှာပဲ.. ဘယ်လို ၀ဋ်တွေလည်းမသိဘူးနော်..
အမရေ.. မီးခိုးတွေ ဒီလောက်မွှန်နေတာ အဖိုးကြီး မသိဘူးနော်.. သူအသက်ရှုမကျပ်ဘူးလားမသိဘူး.. ကံကောင်းလို့.. အမတို့ အထပ်မှာ ဖြစ်တာဆိုတော့ အမတော့ တော်တော် လန့်သွားမှာပဲ..
အခုလိုရေးထားတာလေးတွေ ဖတ်ရတာ သတင်းအတိုလေးတွေ ဖတ်ရသလိုပဲ.. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် အမ.. :)
ဒုက္ခတွေနော်။ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ လောက
ဆောင်းတွင်းက မှောင်မှောင်၊ အေးအေး....
လူတွေလည်း စိတ်ဓါတ်ကျကြတယ်။ လောကကြီးကို
ဖာသိဖာသာ နေတတ်ကြတဲ့ စရိုက်က အိမ်နီးချင်းတွေ ခပ် ကင်းကင်းနေဖို့ ဖြစ်လာသလိုပဲ... တလောက TV မှာ တွေ့လိုက်ရတာက နေ့ခင်း ကြောင်တောင် လူတယောက် ကားတိုက်ပြီး လဲနေတာ လမ်းသွား လမ်းလာတွေက ကျော်သွားကြတာလေ... အမရဲ့ ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က ဖတ်စာထဲက ကောင်းမှုတခု နေ့စဉ်ပြု ကို သတိရတယ်။
ညက ပြန်လာတော့ အဖိုးကြိးတစ်ယောက်တုန်ချိတုန်ချိနဲ့ ဘက်စကားပေ့ါ်က နေဆင်းလာတယ် ကြည့်ရတာ ကားမှားသွားလို့ကားဆရာက ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ပုံဘဲ။ လူတွေလဲ အများကြီးကားဂိတ်မှာရှိပါတယ်။ အဖိုးကြီးက တုန်ချိတုန်ချိနဲ့ လည်ပင်းက ဆွဲထားတဲ့အိတ်ထဲက တစ်ဆယ်တန်ကိုထုတ်တယ်။ မော်ဒယ်အောက်နေတဲ့ ဖုံးတစ်ခုကို ထုတ်တယ်။ ဖုံးကို မျက်မှန်ကြီးတပ်ပြီးနိပ်နေတယ်။ ကိုယ်လေ ဘာအကူအညီလုိလေး ပေးဘို့အရမ်းမေးချင်တယ်။ အိမ်လိုက်ပို့ရမလား ကားငှားပေးလိုက်ရမလား ခက်တာ ကအဲဒီနေရာကို အငှားကားလာလို့မရဘူး။ ဘတ်စကားစီးပြီးမှ အငှားကားဆီကိုရောက်မှာ လူတွေ အားလုံးက ဘာသိဘာသာ ဆိုတော့ မေးရခက်နေတယ်။ ငါဘဲ လူစွမ်းကောုင်းလုပ်ရာ ရောက်မလား. အဖိုးကြီးက မာနကြီးကြီးနဲ့ မလိုပါဘူးကွယ်ကျေးဇူးပါဘဲ လို့များပြောလိုက်မလား သူ့ကိုမျှားစော်ကားရာရောက်သွားမလား အတွေးတွေ တပုံကြီးနဲ့ ကားပေါ်တက်ခဲ့မိတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နောင်တ ရလို့မဆုံးဘူး အဲဒီအချိန်မှာ ကားကလဲရောက်လာတယ်အရမ်းနောက်ကျနေလို့ကားကိုမြင်တာနဲ့ပြေးတာက်ခဲ့မိတာ နောင်တရမဆံုးးဘူး ငါတစ်ခွန်းောလက်တော့မေးလိုက်သင့်တယ်ဆို့ နောင်တရနေမိတယ်။ အဖေအရွယ်တွေ ကိုမြင်ရရင် အရမ်းချစ်ပါတယ။
မြန်မာကျောင်းသားလေး ၂ ယောက် အိမ်ပြောင်းဖို့တက်စီထဲ ပစ္စည်းတွေ တင်နေတုန်း လော်ရီကားက နောက်ကနေ ၀င်တိုက်လို့ခြေထောက်တွေ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရတဲ့ သတင်းကို ဖတ်ပြီး အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
when i received mail. They didn't shown in detail for accident..so, i ask to ..someone.. why did they got accident..?
Now I know well, it's needed to support for them.
Ama,.. in here, we have to pay.. health insurance and accidental insurance even we r students.
Discounts money have to pay such kind of insurance.
afraid to read in S..
Here, currently,..alot of criminal cases r happening.
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ အမရေ..
ဒီမှာလဲ အဲဒီလို အေးစက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးဆို မနေတတ်လို့ ကိုယ်ကစ ပြီး အမြဲ ပူနွေးမိတယ်။ သူတို့ပြည်မှာ နေရလို့ သူတို့လိုတော့ မနေနိုင်ပေါင်။
ကလေးတွေကို မီးရှို့သတ်တဲ့ ကလေးအဖေကိုတော့ ဘယ်လိုနားလည်ရမယ် မသိ။ အဖေရယ် မလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတဲ့ အသံလေးကြားရတယ် ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး ငိုချင်လိုက်တာ..
နောက်ဆုံးတော့ လူလောကရဲ. Stress တွေပေါ့ . . . အဲဒီ အဖေကလဲ သူ.ဘာသူ သေချင်သေတာ မဟုတ်ဘူး . . အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးတွေကို သတ်သေးတယ် . . . ဂျပန်မှာလဲ သားသမီးက အဖေ အမေ ကို ပြန်သတ်၊ မိဘက သားသမီး သတ်တဲ့ case တွေ သတင်းမှာ မကြာခဏတွေ.တယ် . . . ကြောက်စရာကြီး . .
~ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်း ပျော်ရွှင်ပါစေ ~
မတန်ခူးရေ ဖတ်ပြီးတော့ အိမ်နီးချင်း ဆိုလား မိုးမိုး(အင်းလျား)ရဲ့ ၀တ္ထုထင်တယ်။ အဲဒီဝတ္ထုကို သတိရမိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အိမ်နီးချင်းတွေ စပ်စုတတ်ကြသလို အရေးကြုံလာတော့လည်း အကူအညီ ရကြောင်း ရေးထားတာ။ အခု အစ်မပြောသလိုပဲ မြို့ပြရဲ့ အကျိုးဆက်တွေလား၊ လူတွေက သီးသန့်ဆန်လာကြတယ်။
TV သတင်းမှာ ကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်..စိတ်..စိတ်
World Kindness Day နှိုးဆော်စာ အတွက် ကျေးဇူးပါ တန်ခူးရေ...
တိုက်ပေါ်က ခုန် ခုန်ချတတ်တဲ့အကြောင်းတွေ အခုတလော မကြာခဏ ကြားနေရတယ်... ကြောက်တယ်...
** World Kindness Day အကြောင်း အသိပေးထားတာ အတွက် ကျေးဇူးပါ တန်ခူးရေ...
ပုံရိပ်ပြောတဲ့ စာအုပ်က သိပ်ကောင်းပါတယ်...။
မိုးမိုး (အင်းလျား) ရဲ့ မြစိမ်းပြာ ကမာရွတ် တဲ့...
စင်္ကာပူလို တိုင်းပြည်မှာတောင် ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်လာတာ သိရတာ.. စိတ်မကောင်းဘူး.. မ။
hello thet wai,
Mya Sein Pyar is not written by Moe Moe(IL), the author is Nu Nu Yi ( innwa)
အစကတော့ နားမလည်ဘူး။ သေကြောင်းကြံကြတာကိုပဲ ဘာလို့ သက်တောင့်သက်သာနည်းကို မရွေးကြဘဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် နာကျင်မယ့် နည်းကို ရွေးကြတာလဲလို့။ ဘာဖြစ်လို့များ အေးအေးသက်သာ အိပ်ဆေးလေး သောက်မအိပ်တာလဲလို့။
ဒီနေ့ Taxi Driver ကြည့်ပြီး တွေးမိတယ်။
သူတို့တွေက လူအများ အာရုံစိုက်တာကိုပါ လိုချင်ကြတာလား မသိဘူးနော်။
ဒီမှာလဲ ဖာသိဖာသာပါပဲ။း(
မသက်ဝေ.. မြစိမ်းပြာ ကမာရွတ်က
နုနုရည်အင်းဝ ရေးတာလေ။ အမျိုးသားစာပေဆုရတာ။
To Anonymous & Mon (Thu Hnin See)...
Mya Sein Pyar is written by Nu Nu Yi (In Wa)...
လူအချင်းချင်း ကူညီဖို့ကိုတော့ ကြိုးစားကြရမယ်..
အမတို့ဆီမှာလဲ နယ်စပ်ကဆိုတော့ တချို့လူတွေ မျက်စိလည်နေတာ မသိတာတွေ ဖြစ်နေရင် အမကတော့ သွားမေးတာပဲ.. တခါတလေကျ သူတို့က မပြောဘူးသိလား ကြောက်လို့ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ မေးရမယ့်တာဝန်က ကိုယ့်ဆီမှာ ရှိတာပဲ။
အမ ခင်ဦးမေ နောက်တခါ အဲလိုအဖိုးကြီးတွေ ရှိရင် အမစိတ်ထဲကအတိုင်း ကူညီနိုင်ပါစေနော်။
အမတန်ခူးနော်.... သူများက ဂွကျလို့လားလို့ :P